Jawaab Qoraalkii Puntland: Tahriibkii Badday ku Tuureen, Tabliiqiina Xabsi
Cabdiwaaxid Khaliif ma culimaa mise waa caamo?.
Ninka C/waaxid la yiraahdo marna culimuu jilaa marna caamada waa ka caqli gaaban yahay…
Erayadaas waxay ahaayeen kuwo ka soo burqanayay dood dhexmaraysay dhalinyaro Soomaaliyeed oo soo gudatay waajibkoodii cibaadada alle ee salaada maqrib.
Waxay goobtu ahayd agagaarka xarunta jaaliyada Soomaalida ee loo yaqaan Brain Coyle center oo aan wax saasa ka fogayn masjid Shaafici oo dhalintaasi markaas ku soo tukadeen.
Dooda oo socota ayaan dhexda kaga soo dhacay,kadibna waxaan codsaday in la ii dulmaro dooda si aan barbarkayga uga galo.
Inan ka mida dhalintii ayaa isagoo si fiican ii soo eegaya fartana igu fiiqaya iyiri horta Cismaanow aan ku weydiiyee adaa bogaas Somalitalk wax ku qorqoree ninka la yiraahdo C/waaxid Khaliif ma culimaa mise waa caamo?.
Waxaan usheegay inaanan aqoon ulahayn ninka uu iweydiiyey,hadaanse ka hadlo aragtidayda wuxuu iila muuqdaa culimo caamada ka agdhow una janjeera dhanka caamada.
Doodii ayaa sii kululaatay oo isu bedeshay talantaali qofba meeshiisa su’aal iyo jawaab iyo ana waxay ila tahay uu ka soo tuuro.
Markii aan mudo ku jiray doodaas ku saabsan qoraalada uu soo galiyo golayaasha C/waaxid Khaliif oo qofba uu fikirkiisa sida uu u’arko ka dhiibanayey ayaa waxaa ugu dambayn la is tusay in C/waaxid yahay nin taariikhda jirtana aan ka run sheegin,wuxuu rabana aan la aqoon. Waxaa taas ka sii darayd markii nin raga ka mida uu yiri waxaan hayaa qoraaladiisa,hadaad akhridaana midba mid kale waa ka hor imanayaa.
Hadaba waxaan dib ugu noqday qoraalada uu soo galiyo golayaasha C/waaxid Khaliif, waxaa ii soo baxay horta inaan lagu sifayn Karin nin culima ah iskaba daayee inuu xitaa diinta Islaamka wax uga bilaaban yihiin,markaan go’aankaas qaatay inaan sidaas ku sifeeyo ayaan misna indhahaygu qabteen qoraal kasta oo uu soo qoro oo uu meelo ka cuskanayo xadiisyo iyo sheekooyin asxaabtii.
Shaki baa igaloo hadana waxaan is iri ninku sidee wax ka yihiin waaba kan soo daliishanaya axaadiista iyo qisooyinkii asxaabtee.
Waxaan misna soo xasuustay waa aan cashar tafsiirka quraanka kariimka ka raacan jiray sheekh aad aftahan u’ahaa cilmiga Islaamkana heer sare ka gaaray oo markuu wax tafsiirayaba inta ay la tagto jacayl uu uqabay dawladii Maxamed Siyaad ku sifeeya meelaha fiicanba xukuumada, oo ninkii fiican oo asxaabi ahba ku sifeeya Maxamed Siyaad.Waxaa sidoo kale jiray iyadana wadaad kale oo isna heer sare ka gaaray aqoonta Islaamka oo ka soo hadli jiray raadiyo Kulmis ee jabhadii SSDF ,wadaadkaas oo isna wax kasta oo xun ku sifayn jiray Maxamed Siyaad iyo xukuumadiisa.
Markaan soo xasuustay labadaa wadaad ayaan misna iri maxaad ula yaabin C.waaxid muxuuu kaga duwan yahay kuwaa tafsiirka quraanka iyo axaadiista hadba meeshay doonaan urari jiray ama ugu fasiri jiray.
Waxaan misna isweydiiyey oo culimadaasi ujeeday lahaayeenoo midna wuxuu ayidsanaaa xukuumadii Maxamed Siyaad midina waa ka soo horjeedayoo waxayba ahaayeen rag la garan karo waxa ay waxaas usamaynayaan,C/waaxidse muxuu rabaa sidiisa horta yaa ii sheegi kara?.
Kaydka Qoraalada C/Waaxid Khaliif
| Kaydka 1aad | Kaydka 2aad |
| Kaydka 3aad | Kaydka 4aad |
Waxaa wax la ga xishoodo ah qof waliba diin Islaam unasab sheeganaya inuu ummad isku diro oo dagaal iyo fidno ku waaniyo.Dib ujaleec been ka sheegi mayo qoraaladii uu soo galin jiray waagii dagaalada sokeeye ay ka dhex socdeen dadka walaalaha ah ee reer Puntland sida uu ubuunbuunin jiray iyo qoraaladiisii dib ujaleeca idinkoo ka raadsanaya bogga Somalitalk sannad ka hor. Eega oo dib ujaleeca nabadii laga soo dhaweeyey degaanka sida uu weli qoraalo ugu durayey in dagaalka aan la joojine la sii wado. Haday beenowdo warkaan inuu ku sifoobay C/waaxid xaal hala ii soo doonto waan bixine.
Nabadayntii mucaarad iyo mu ayidba loo riyaaqay in la qaboojiyo dhiigaas muslinka,walaalaha ee isku daadanaya in la soo afjaro, qofka wali usii hamuun qaba inuu sii daato akhirstayaashaan weydiiyey qofkaas diin ma loo nisbayn karaa?.
Waxaan jeclaystay inaan idinka tuso qormadiisii dhawayd erayo uu ku aflagaadaynayo ummada ku dhaqan degaanka la magac baxay Puntland waana kuwan,anigu kama hadlayo siyaasi waxa uu ka sheego laakiin tacadiga uu ku samaynayo C/waaxid reer Puntland waa midaan loo dulqaadan Karin qof damiir lihina uu inta uu akhristo indhaha ka qabsan Karin ila eega meelihii idamqay.
“Dadka “Puntland” hadday rabaan inay khaladkoodii hore saxaan waa inay iska dheereeyaan C/hi iyo Moorgan oo aysan hor keenin meel Soomaali wax ku qaybsanayso. Kama wado qab-qablayaashe kale waa fiicanyihiin laakiin ceeb ma ahan inuu qofku la tasho dadkiisa. Arrintaan waa talo maxaa yeelay ma jiro qof muslim ah oo muslimiin kale dhib la jecel iskaa daa dadkiisee.”
Waxaa isweydiin leh waa maxay khaladka reer Puntland oo dhan uu dusha usuray C/waaxid reer puntland oo ay galeen oo ay Soomali ka raali galinayaan?.Armuu ka waday dhibkii reer Puntland laga galay halaga raali galiyo oo qalinku ka boobay isagaa noo soo sheegi doona haduu qalinku khaladka leeyahay.
Hadalkiisii waa sii watay oo misna isagoo meel kale ku aflagaadaynaya iskana dhigaya nin la talinaya ayuu yiri sidan;
“Marka reer “Puntland” waxaan idiin ka baqayey waad is-haysaan. Waxaad diirada saarteen la dagaalanka diinta Ilaah ilaa aad gaarteen in tabliiqii idin ka baxsanwaayo halka Soomaalida kale ay ku jirtay ganacsi, dhul-beerood qabsasho, degaan aysan lahayn degid, IWM.”
Isagoo misna oranaya waan idinla talinayaa ayuu yiri sidan ;
“Waan ogahay inaydaan lahayn aad ku diiddaan in C/hi xulo xubnahaas haddii xusulkiisu xabaal ka sarreeyana isagaa xulaya marka horta wuu idin dhaarin doonaa ee haka yeelinina. Ilayn isagaa kitaabadii Towxiidka Gaalkacyo ka aruursaday, isagaa xijaabkii dumarka diiday marka inuu Ilaah idin ku dhaarsho dow uma laha. Teeda kale waxaad samaysateen diin kale waa dastuurkee marka iyadana haddaad ku dhaarataan waa shirki kale.”
Waxaan oran lahaa C/waaxid allana utoobad keen oo ummad wax walba leh ayaad isku qaaday oo aflagaado iyo sumcad xumo ku sifaysay waana wax laga xishoodo.
Waxaadna kala saartaa raga siyaasiyiinta ah ee reer Puntland iyo ummada ku nool oo wax walbaaba leh.
Waxaan kula wadaagaa waxyaabaha qaar ama afkaarta ,qaarna waxaan qabaa inaad ku talaxtagtay oo weliba iftaraa ay dhaaftay been qaawan oo sheegideeda xitaa laga xishoodo.
Waxaan ku faraxsanahay inaadan i orayn waa taageere C/laahi Yuusuf. Sidaan kor ku soo sheegay waa suurowdaa inaan ka midaysanahay meelaha qaar,qaarna aan kaaga soo horjeedo.
Tusaale waxaan ka midaysanahay figrada ah kornayl C/laahi dibudhac mooyee Soomaali iyo cid kale toona horumar ukeeni uu mayo.
Waxaan kugu raacsanahay inuu yahay nin eex iyo qabyaalad iyo isku dir reer Puntland dhexdeed ku si foobay,waxaan kaloo kugu raacsanahay in uusan ehel u ahayn diinta Islaamka kana shaqeeyo burburinta dacwada Islaamka kana shaqayn lahaa haduu jaanis kan uga sii fiican uu soo maro.
Waxaanse kaaga soo horjeedaa figradan hoosku qoran ood adigu aaminsantahay.Waxaa Soomaalidu ku maahmahdaa Gaal dil gartiisana sii.
In uu ugu liito C/laahi qabqablayaasha isugu yimid Kenya, anoo fikir ahaan ka soo horjeeda C/laahi Yuusuf misana marka la barbar dhigo kuwa haatan ku sugan Kenya inuu yahay kan loogu qaato uguna mudan inuu hadiiba iyaga uun ay tahay waa qabqablayaashee inay wax noqdaan waxaan oran lahaa isagaa ugu mudan waana tan sababta igamana ahan inaan raacay ama qabyaalade waa tan iyadoo sababaysan.
C/laahi waa qabqablaha kaliya ee aysan jirin maanta Soomaali ka sheegan karta dhib uu ugaystay marka laga reebo reer Puntland oo uu kala reebay dhib weyn oo lixaad lehna ugaystay,weliba aan hoos usii daadago oo iraahdo Majeerteen cidaan ahayn oo uu dhib ugaystay majirto ayaan qabaa laga soo bilaabo Kulmis ilaa hada la joogo reer Soomaaliyeed oo wax ka tirsanaya mana maqal mana filayo inay jirto hadaysan ahayn been abuur sida uu sameeyey C/waaxid Khaliif.Majeertaan haa iyagu waa mucaaradi karaan oo wax ka sheegi karaan ilayn dibin daabyo in ug ufilan ayuu ugaystaye.
Igama aha faan aan faaninayo, igamana aha jacayl aan jeclahay,sidoo kale ma ahi taageerayaasha jeebka ugu jira jeebna ma gali karo waase xaqiiqda aanan anoo mucaarad ah iyo midka mu ayidka u’ahba aysan inkiri Karin .
Arinta waxaan qabaa C/waaxid inaadan isku khaldin shakhsi khaladka uu shacabka ka galo ama maamul jira oo sharci ah,laakiin aan dhawro karaamada ummada iyo jiritanakooda ummadeed.
C/waaxid dadkii badu ay shuftada doomaha wadata ay ku daadisay wuxuu ka dhigay dad ay shacabka Puntland ku daadiyeen bada oo ay raali ka wada yihiin akhriya cinwaanka qoraalkiisii.
Ugu dambayn waxaan ku oran lahaa hadaad jeceshahay wanaaga degaanka aad ka timid ee Puntland iyo dhulka Soomaaliyeed oo idilba, ka shaqee wixii wanaaga oo ummada dani ugu jirto ee haka shaqyn cay iyo wax ka sheeg oo qura.
Wixii khaldan ku sax si asluubleh oo daacadnimo ah ee yaysan kula tegin xanaaqa iyo dhibsashada aad dhibsatay maamulxumida ka jirta degeenkeena Puntland. C/laahi Yuusuf ma laha Puntland ee dadkaa leh, inkastuu aaminsan yahay inay tahay Puntland jaranjaro uu ku gaarayo xukun Soomaaliyeed misna haduu kornaylku god galo degaanku god ma geline degaanku waa baaqi ahaanayaa ee aan ku dadaalo wixii degaanku dani ugu jirto waxaan dani ugu jirina sida hurinta dagaalada iyo dacaayadaha degaanka iyo dadka ku nool aan iska deyno. Waxaan markale kaa codsanayaa inaadan taariikhda been ka sheegin oo wixii aad necebtahay xitaa aad taariikhdooda run ka sheegtaa.C/waahix sidoo kale jabhadii SSDF oo taariikhdeeda aanan halkan ku soo koobi Karin waakan ku sheegay dabadhilif amxaaro.
Waxaan qabaa SSDF Soomaali oo dhan ayey abaal ku leedahay waayo iyagaa sababay ama soo dedejiyey ama dadka baray in dawlad awood leh oo faajir ah laga hor iman karo oo afka ciida loo dari karo waana in shacabka Soomaaliyeed ay ka abaal gudaan taas.
Waxaan C/waaxid iyo inta kale ee qoraalkaygan akhrisan doonta ucadyanayaa inaanan ka mid ahayn taageerayaasha kornayl C/laahi Yuusuf hase yeeshee mucaaradnimadaydu ma aha mid indha la’a .
Mucaaradnimadu waa inay ahaataa mid ufaa’iidaynaysa ummadda, waxna ay ka korarsan karaan kan aan mucaaradayo iyo kan igu taageersan mucaarad nimada.
Mucaaradnimadu sideeda waxbay saxdaa,hadayse noqoto tan C/waaxid Khaliif oo kale waxaan qabaa iyadaa ka daraysa wixii ay sixi lahayd.Caqligu ha shaqeeyo ayaan ku soo gunaadayaa qormadaydan.
Wixii khalada oo aad ku aragtaan qormadaydan waan idinka raali galinayaa oo bini aadan ma noqon karo 100% sax.
QORAALADII HORE EE CUSMAAN AXMED SHEEKH